Cofttek ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူအားအစားအသောက်များကိုဖြည့်စွက်ပေးသည်
Cofttek Holding လီမိတက်
Cofttek Holding Limited သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးထုတ်လုပ်မှု၊ သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ရောင်းအားပေါင်းစပ်ရန်အဆင့်မြင့်နည်းပညာဆေးဝါးဇီဝဓာတုလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ သူသည် Luohe Chemical Industry Park တွင်တည်ရှိပြီးအဆင့်မြင့်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကတိကဝတ်ပြုထားပြီးဆေးဝါးလုပ်ငန်းအတွက်ဆန်းသစ်သောထုတ်ကုန်များနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
Cofttek သည်ဇီဝဆေးပညာနယ်ပယ်ရှိကုမ္ပဏီများအတွက်ထိပ်တန်းအရည်အသွေး CRO၊ CMO ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အရည်အသွေးသုတေသန ၀ န်ဆောင်မှုများပေးနေစဉ် APIs၊ အလယ်အလတ်နှင့်ဓာတုပစ္စည်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအဓိကအာရုံစိုက်သည်။
Cofttek တွင်အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သည့်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင့်ပထမတန်းစား R&D အဖွဲ့များရှိပြီးဆေးဝါးပေါင်းစပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ဆေးဝါးအရည်အသွေးသုတေသနတို့မှထူးချွန်သောကျွမ်းကျင်သူများပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်ဆေးဝါးဆိုင်ရာဓာတုဗေဒ၊ ဓာတုနည်းပညာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဇီဝအင်ဂျင်နီယာစသည့်နယ်ပယ်များတွင်လူသိများပြီးအပြိုင်အဆိုင်အရေးကြီးသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ဖောက်သည်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်မြောက်အမေရိက၊ ဥရောပ၊ အိန္ဒိယရှိဆေးဝါးကုမ္ပဏီများနှင့်နီးကပ်စွာလက်တွဲဆောင်ရွက်သည်။ နှင့်တရုတ်နိုင်ငံ။
cofttek Holding Limited မှ“ အရည်အသွေးအခြေခံ၊ ဖောက်သည်ပထမ၊ ရိုးသားသော ၀ န်ဆောင်မှု၊ အပြန်အလှန်အကျိုးခံစားခွင့်” ၏နိယာမကိုစွဲကိုင်ထားသည်။ ဖောက်သည်များအားပြီးပြည့်စုံသောစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောထုတ်ကုန်များထောက်ပံ့ပေးသည်
ရိုးသားစွာသင်နှင့်အတူပူးပေါင်းနှင့် win2win အနာဂတ်အောင်မြင်မှုရရှိရန်မျှော်လင့်!
မာကု။ Z. ကို C
လီလီ Huang က
CRO, CMO န်ဆောင်မှုများ
ဇီဝနည်းပညာ, ဓာတုနည်းပညာနှင့် analytical စမ်းသပ်ခြင်း၏အားကြီးသောပလက်ဖောင်းအတူ APIs အား, intermediate နှင့်ဒဏ်ငွေဓာတုပစ္စည်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအာရုံစိုက်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးမြင့် CRO, CMO န်ဆောင်မှုများနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ဇီဝဆေးဝါးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကုမ္ပဏီများအတွက်အရည်အသွေးမြင့်သုတေသနန်ဆောင်မှုများပေးနေစဉ်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်အဆင့်မြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း R&D အဖွဲ့နှင့်စီမံခန့်ခွဲရေး ၀ န်ထမ်းများရှိသည်။
ISO9001: 2000 နှင့် GMP လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး။